china-chinodzora - chinodzora, chinodzora honye, ​​magiya enjini, mapuraneti magiya, anomhanyisa anoderedza, akasiyana, helical giya, sprial bevel magiya, ezvekurima magiya, matarakita magiya, marori magiya, honye gearbox
Chinomhanyisa chinodzora kazhinji chidimbu chemuchina. Ichi chingori chitima chegiya pakati pemotokari nemuchina uyo unowanzo shandiswa kudzikisira kumhanya kunoendeswa simba. Yekumhanyisa yekudzora, inozivikanwawo segiya rinodzora, iri michini gadget ...
Kubatanidza Webhusaiti chinongedzo - Dhinda Fit (BS / DIN / ANSI) Iyo yakasarudzika yekubatanidza chinongedzo cheAnSI dzakateedzana dzakasungwa cheni, zvakare inoshandiswa pamaketani akaomeswa nzvimbo yakakosha kumhanya kana mamiriro akaoma anosangana. Yakapihwa nemapini maviri ekubatanidza akaiswa mukati ...
Precision Roller Chain, Elements uye Kubatanidza BacklinksIyo chaiyo simbi roller cheni iri chaizvo nzira inoshanda zvakanyanya uye inoshandisirwa yekuendesa magetsi magetsi, ayo, panguva yekuranga kwekushandisa kwemaindasitiri, yakanyatso ...
Precision Roller Chain, Elements uye Kubatanidza LinksIyo chaiyo simbi roller cheni inowanzo kuve nzira inoshanda uye inoshandisika yekuendesa magetsi simba, ayo, mukati memunda wekushandisa kwemaindasitiri, angangoita akanyanya kukunda mamwe marudzi ese ...
Kubatanidzwa kweViking Chains Boka muConnexus Maindasitiri kwakabvumidza kuenderera paVC Brand yeSimbi Maketani. VC Brand inoti yakanakisa yekugadzira maitiro, uye marefu masevhisi hupenyu hwezuva nezuva. Ichi chinoshanda chinosanganisira ...
Iko kusunganidzwa kweViking Chains Boka muConnexus Maindasitiri kwakabvumidza kuenderera kweVC Brand yeSimbi Maketani. VC Brand inotaura maitiro ekugadzira mhando, uye hurefu hwebasa huripo. Ichi chakabudirira chiratidzo chinosanganisira iyo ...